ကိတ် - တည်းဖြတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံး
ပို့စ်များ အမျိုးအစားများ တပ်ဂ်များ
အကူအညီရယူပါ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းပါ VIနည်း အဖွဲ့ ကိတ်၏လာဘ်ကောင် စုပေါင်းရန်တောင်းဆိုမှုများ အထားအသို အရောင်တင်ပြနိုင်မှု အရောင်သင်းများ
မြန်မာ English British English Català Català (Valencià) Deutsch Eesti Español Français Italiano Lietuvių Nederlands Norsk (nynorsk) Polski Português Português brasileiro Română Slovenčina Slovenščina Svenska Türkçe Český Ελληνικά Русский Українська 日本語 正體中文 简体中文 한국어
လင်းနက်စ်၊ ဝင်းဒိုးစ် နှင့် မက်စ်အိုအက်စ်တွင် ရရှိပါသည်
ကိတ်သည် စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝသော စာသားတည်းဖြတ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်
ကိတ်ကို စွမ်းဆောင်ရည်အများအပြားထည့်သွင်းထားသောကြောင့် သင်အတွက် စာဖိုင်လ်များ ကြည့်ရန်၊ တည်းဖြတ်ရန်လွယ်ကူစေမည်။ ကိတ်သည် တစ်ချိန်တည်းတွင် ဖိုင်လ်များကို တပ်ဘ်များနှင့် မြင်ကွင်းအခွဲများတွင် တည်းဖြတ်နိုင်ပေသည်။ ပြီးနောက် ပလပ်ဂင်များလည်းပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့တွင် ကိတ်တွင်တိုက်ရိုက်သုံးနိုင်သော မြုပ်သွင်းတာမီနယ်၊ ရှာဖွေ၊အစားထိုးပလပ်ဂင်များနှင့် သင်၏အမ်ဒီ၊ အိပ်ချ်တီအမ်အယ် အပြင် အက်စ်ဗွီဂျီဘာ ဘယ်လိုပေါ်မည်ဆိုသည်ကို ပြသော အကြိုမြင်ကွင်းပြပလပ်ဂင် စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
Syntax Highlighting ဖြင့် သင်၏ကုတ်ကို လှပအောင်လုပ်ပါ
ကိတ်သည် ဘာသာစကားသုံးရာကျော်ကို အလင်းတင်ပြပေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ပရိုဂရမ်မင်းဘာသာစကားအားလုံး၌ ကုတ်ဖတ်ရှုရာတွင် လွယ်ကူစေသည်။ ကွင်းများ ဘယ်လိုပြုမူသည်ကို ကိတ်နားလည်သောကြောင့် ရှုပ်ထွေးလှသော ကုတ်အတုံးအဆင့်အစီအစည်များတွင် သွားလာရ၌ ကူညီပေးနိုင်သည်။ စာရေးစဥ်တန်း၍စာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးခြင်းပါဝင်သောကြောင့် မထုတ်ဝေမီ စာများကို စစ်ဆေးရာတွင် ကူညီနိုင်ပေသည်။
ရှုပ်ထွေးလှသော ပရောဂျက်များတွင် အကျိုးရှိစွာ အလုပ်လုပ်လိုက်ပါ
ဖိုင်လ်အများအပြားကို ခွဲထားသော မြင်ကွင်းများနှင့် တစ်ပြိုင်တည်း အလုပ်လုပ်လိုက်ပါ။ ပရောဂျက်ဘေးတန်းကို သုံး၍ သင်၏ပရောဂျက်ဒါရိုက်ထရီဖွဲ့စည်းပုံများအတွင်း သွားလာလိုက်ပါ။ ကိတ်၏အလိုက်သိတပ်ဘ်များကို သုံး၍ မကြားသေးမီက ဖွင့်ထားခဲ့သော မှတ်တမ်းပုံနှိပ်မူများ ဖွင့်လိုက်ပါ။ ကောင်းမွန်လှသော ရှာဖွေ၊ အစားထိုး ကိရိယာဖြင့် သင်၏ပရောဂျက်များအတွင်း လျင်လျင်မြန်မြန်ရှာဖွေနိုင်ပေသည်။
သင်၏နောက်အပ္ပလီကေးရှင်းကို ကိတ်နှင့် ဖန်တီးပါ
ဘာသာစကားဆာဗာလုပ်ရိုးလုပ်ထုံး (အယ်လ်အက်စ်ပီ) ၏အကူအညီဖြင့် ဘာသာစကားအများအပြားအတွက် အလိုအလျောက်စာပြီးမြောက်စေမှု ပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ပရိုဂရမ်မင်းအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်လှသော ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပေသည်။ ၎င်းကို ကုတ်တည်းဖြတ်ရန်အတွက် သေချာရေးသားပေးထားသည်။ ညွှန်ကြားကုတ်ရေး၍ရသော အလိုအလျောက်အင်တင်းခြင်း၊ ဗွီအိုင် ပေးချက်ထုံးနည်း၊ ထောင့်မှန်စတုဂံတုံးရွေးချယ်ထုံးနည်း၊ အလိုက်တသိ မှတ်ချက်ရေးခြင်း၊ဖျက်ခြင်း ကိုင်တွယ်မှု နှင့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်အများအပြားပါဝင်ပေသည်။
ကိတ်တွင် ဒီဖော့အားဖြင့် ပလပ်ဂင်အများအပြားပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် အခြားမည်သည်စာသားတည်းဖြတ်ကိရိယာထက်မဆို စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝလှပေသည်။ ပေါင်းစည်းထားသော တာမီနယ်အီမြူလေတာကို ကိတ်တွင် တိုက်ရိုက်သုံး၍ အက်စ်ကျူအယ်စုံစမ်းမှုများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဂျီဒီဘီသုံး၍ သင့်ပရိုဂရမ်ကိုပြစ်ချက်ရှာဖွေခြင်း၊ ပရောဂျက်များကို တစ်ချက်တည်းနှိပ်၍ တည်ဆေက်ခြင်းအပြင် အခြားလုပ်ဆောင်မှုအများအပြားအဝင်သည်။
The current state up to KDE Gear 22.04 Kate & KWrite always existed as pair in the last 20 years. KWrite was there first,aSDI editor already shipped with very early KDE versions. Kate was started by me to haveaMDI variant of KWrite. KWrite was kept untouched, more or less, over the last 20 years beside minor improvements and bug fixes. Naturallyalot features slipped in due to the fact that it uses KTextEditor as editor component. Read More
Given the great work others did already on the Qt6porting of KDE Frameworks, let’s takealook at Kate & KWrite on Qt 6. With only minor patches, both applications now run on the current master state of KDE Frameworks and Qt 6.2. Close to all functionality is available, I think the only stripped out part is the hot new stuff upload for snippets and I didn’t test the Konsole part. Read More
Ever since I started contributing to Kate there has been one feature request that was being requested in almost every blog post or discussion about kate: multiple cursor support. I am happy to say that after3or4days of really pushing myself to implement this and address all the issues we just merged it (KDE Frameworks 5.92)! It will be available not only for Kate users, but for KDevelop, KWrite and any application that uses KTextEditor as its editor component. Read More
In the last few weeks we had time to nicely improve the general UI of our editor. Naturally, the overall structure of the main window stays the same, withacentral splitter area and some tool views around. But if you takealook at the two screenshots below that show the last release and the current master branch version, you will spot some differences that in my eyes improve on what we have inanice way. Read More
Maintained by KDE Webmasters (public mailing list). Generated from 3b2ab02e. KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V. | Legal